Ghọta Ihe Odide Kasị Mma na Ihe Ntanetị Weebụ nke Web Data nke Ga-azọpụta Oge Anyị - Ntụle Semalt
A na-emepụta ngwá ọrụ weebụ iji kpokọta ozi bara uru site na weebụsaịtị. Ha na-arụ ọrụ ha na Java, C ++, Eke Ọgba, Ruby, nakwa asụsụ ndị ọzọ na-emepụta ihe. Ụfọdụ n'ime ntanetị weebụ na ọrụ ntanetịime ọdịnaya dị mma iji nweta data ezighi ezi na nke na-ezighị ezi n'ime sekọndrị. A tụlere ụfọdụ n'ime ngwa ndị a na-atụghị anya ya n'okpuru:
1. Ihe nyochacha ihuenyo
Ọ bụ otu n'ime ọrụ ọrụ nchịkọta kachasị mma ma dị egwu nke ga-azọpụta oge anyị. Bubata. ntinye ngwa ngwa, desktọọpụ free nke na-enyere aka nyocha data bara uru sitere na saịtị na blọọgụ ole na ole. Ọrụ a na-eme ka ibe weebụ anyị dị ka isi iyi data nwere ike ịmepụta API site. Ya mere, ọ na-azọpụta oge anyị, ọ dịkwa mma maka ụlọ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ. Bubata. Ee anaghị edozi ibe ndị i webatara na mbụ. Naanị mwepu nke mbubata. ọ bụ na ọ nweghị ike ịnyagharịa site n'otu saịtị gaa na nke ọzọ. Ọ pụtara na ị ga-etinye URL ndị ịchọrọ iwepụ data site na aka.
Ọ bụ ọrụ nhichapụ data. Uipath bụ ọkachamara n'iwepụ data na ntanye ọdịnaya maka ndị ọrụ ya. Ọ nwere ike ịrụ ọtụtụ ihe aga-eme n'otu oge ma kwadoro ma coders na ndị na-abụghị coders. Ọzọkwa, usoro a nwere nnukwu njirimara nke igodo peeji nke nwere ike ibelata faịlụ PDF gị, na-enweta gị nchọta rịọrọ ma na-azọpụta oge gị na data mmịpụta. Naanị ị ga-emeghe ọkachamara ahụ, kpọtụrụ URL ịchọrọ iwepụ data site na Uipath ga-amalite ịrụ ọrụ ya. Ngwa a ngwa ngwa na-agbanye site na ọkụ na-enweta gị nzaghachị na nke a pụrụ ịdabere na ihe nkeji. Ị nwere ike ịnweta akwụkwọ CSV na Excel. N'ịbụ usoro mmemme kachasị elu, Uipath agaghị adabara mmalite dịka ọ dị ntakịrị.
Kimono Labs bụ nhọrọ mbụ nke ndị mmemme, ndị nta akụkọ, freelancers, webmasters, ụlọ ọrụ, na ndị na-abụghị ndị ọkachamara. Ọ na-arụpụta ihe nchịkọta data na ntanetịime ọdịnaya n'otu oge ahụ. Ngwá ọrụ a kwadoro site na njirimara nchịkọta data, nke na-ahapụ gị ka ịlele ma ọ bụ nyochaa njirimara data mgbe a na-efopụ ya. Ọzọkwa, Kimono Labs dakọtara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe nchọgharị weebụ na sistemụ arụmọrụ. Ọ naghị enye ụlọ ọrụ igodo ọ bụla, ị ga-ewepụta oge iji kụziere Kimono Labs tupu e wepụ data na usoro a chọrọ.